मन्त्री आले जाने भए जेल ? - Mitho Khabar
मन्त्री आले जाने भए जेल ?
June 18, 2022 mithokhabarLeaveaComment on मन्त्री आले जाने भए जेल ?
नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले धम्की दिएकाे भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैं र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा निवेदन दिएका छन् ।
आलेबाट हातपात र दुर्व्यवहार भाेगेका अधिकारीले दुवै कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भएर बुझाएको निवेदनमा मन्त्री आलेले गोली हान्ने र कुटपिट गर्ने धम्की दिएको उल्लेख छ ।
पर्यटनमन्त्री आलेले नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीमाथि हातपात गरेकाे घटना हिजाे बाहिरिएकाे थियाे । अधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर आलेले अश्लील गालीगलौज गर्दै कार्यकक्षमै हातपात गरेका थिए ।आफूले सिफारिस गरेका मान्छेलाई जागिर दिन ढिला गरेको झाेंकमा मन्त्री आले आवेगमा आएका थिए । तर पर्यटनमन्त्रीकाे सचिवालयले मन्त्रालयमा यस्ताे घटना नभएकाे दाबी गर्दै विज्ञप्ति निकालेकाे छ ।
मन्त्री आलेले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग अश्लील शब्द प्रयोग गरी गाली गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएका हुन्। आलेले गरेको गालीगलौजसहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध सुरु भएको छ।आले पटक पटक विभिन्न बहानामा आलोचित हुँदै आएका छन्। यसअघि पनि मन्त्री आलले कामको सिलसिलामा भारतको मुम्बई पुगेका एक नेपाली युवकसँग गालीगलौज गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला २ मिनेट २५ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
त्यतिबेला आलेको राजीनामासमेत माग भएको थियो। मन्त्री आलेको सचिवालयले त्यतिबेला तथ्यहीन आरोप लगाउन खोजेको भन्दै खण्डन गरेको थियो।
अडियोमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा रहेका अर्का कुनै व्यक्तिले हातपात हुनबाट रोकेको सुन्न सकिन्छ । अडियोमा अधिकारी मन्त्री आलेको कार्यकक्षमा पुगेको र ढोका खोलेको सुनिन्छ । यसअघि कामको सिलसिलामा भारत बस्ने जगत ओली नामका युवालाई तथानाम गाली गर्दै खुट्टा भाँचिदिने धम्की दिएर आले विवादमा तानिएका थिए ।
म से क्सी हुँदा तपाईंलाई के समस्या
स्तनलाई ठुलो र आकर्षक बनाउन के गर्नु पर्ला ? तपाइको सुझाव चाहन्छु ,,,
भखरै नेपालमा गयो भूकम्प – Daily khabar pati